ရင်နင့်ဖွယ်အမေ.. | ဒီရေ
ခေတ်ထဲမှာ တိုးတက်ဖို့ အမေ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဖျောက်ဖျက်
ဒီလိုနဲ့ပဲ.. အမေ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ တဖြေးဖြေးကွယ်ပျောက်
အော်… ဒါပေမယ့်.. အမေ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကွယ်ဖျောက်
ခေတ်နောက်ကို တောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့ အမေ့သားသမီးတွေ
ခေတ်အောက်မှာ နောက်ကောက် သူတပါးအောက်မှာ
အမေ.. နာကျင်လှိုက်ကြွ ရင်ထဲမှာ ဒေါသတွေ ပေါ်လာတဲ့အခါ
အမေ့ရဲ့သမိုင်းတွေ ပြန်လှန်ပြ.. ပုဂံခေတ်နှောင်းပိုင်းကတည်းက
အမေ… သွေးရဲတဲ့ အမေ့သားတချို့ သွေးကွဲသူက ကွဲနေပြီ..
ဒီလိုပါပဲ အမေ့သမီးတွေလည်း ဆံထုံးပေါ်မှာ ပုဝါလွှား
အမေ့သမီးမှန်းသိလို့ လမ်းပေါ်မှာ ရုတ်တရက်
အခုများဖြင့် အမေရယ်.. အမေရဲ့ ပညာတတ်သားသမီးတချို့
သူများအိမ်မှာကျွန်လုပ်ဖို့တဲ့အမေ.. အမေ့ရင်ခွင်ထဲက ရှိသမျှထောက်ခံချက်တွေဆွဲ
တဖွဲဖွဲ. တဖြောက်ဖြောက်.. ဟိုကနေဒီရောက်.
အမေရေတောင် မခေါ်အား သူစိမ်းများကြားမှာ အခစားဝင်
နင်းသမျှခံ ပေးသမျှယူ ငြူဆူစရာပါပဲအမေ…
သူစိမ်းတို့အောက်မှာ ဘာရာထူးပဲရရ ဘယ်မှာပဲနေနေ
သူစိမ်းဆီမှာ သခင်မဖြစ်သမျှ.. အမေ့ရဲ့သားသမီးတွေ
အမေ… သူတစ်ပါးအိမ်မှာ ကျွန်လုပ်နေဆဲ
မသဲကွဲလို့ဆိုပြီး အိမ်ရှင်က ဘယ်သူ့သားလည်းလို့မေးတော့
ခံစားမိတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်တာပါ